गर्ने होइन लगानी ? ज्योति लाईफको आईपीओ खुल्यो, कति दिने आवेदन ? - Arthasansar
गर्ने होइन लगानी ? ज्योति लाईफको आईपीओ खुल्यो, कति दिने आवेदन ?
शुक्रबार, २१ फागुन २०७७, ०६ : ५३ मा प्रकाशित
ज्योति लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले आज (फागुन २१ गते, शुक्रबार) देखि साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन तथा बिक्री खुल्ला गरेकाे छ ।
कम्पनीले प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ अंकित दरमा ६६ करोड रूपैयाँ बराबरको ६६ लाख कित्ता आइपिओ निश्कासन तथा बिक्री खुल्ला गर्न लागेको हो । जसमध्ये ५ प्रतिशत अर्थात् ३ लाख ३० हजार कित्ता सामूहिक लगानी कोषहरुलाई, ३ लाख ३० हजार कित्ता कर्मचारीहरुलाई र बाँकी रहेको ५९ लाख ४० हजार कित्ता सर्वसाधारणको लागि छुट्याइएको छ ।
उक्त साधारण सेयर सर्वसाधारणमा सार्वजनिक गर्न निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको काम एनएमबि क्यापिटल लिमिटेडले गर्नेछ ।आईपीओमा लगानीकर्ताले न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम ६६ हजार कित्ताको लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । लगानीकर्ताले आइपिओमा छिटोमा फागुन २६ गते र ढिलोमा चैत्र ६ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् ।